Yaalii Fonqolcha Mootummaa: Abbaan Alangee qorannoo xumuruun himannaa eegalufi - BBC News Afaan Oromoo
Qorannoon ajjeechaa A.L.I Waxabajjii 15 2011 magaalaa Baahirdaariifi Finfinnee raawwate xumuramee himata yakkaa banuf akka jiru Abbaan Alangee Waliigalaa Itoophiyaa beeksise.
Abbaan Alangee Waliigalaa Obbo Birhaanu Tsaggaaye ibsa har'a kennaniin Itaamaajor Shuumii Itti - aanaa Janaraal Birhaanuu Juulaa ajjeesuf yaadni akka turellee ibsaniiru.
Ajjeechaa waggaa darbe raawwaten Itaamaajor Shuumii Waraana Itoophiyaa Janaraal Sa'aara Mokonniin, Pirezidantii Naannoo Amaaraa Dr Ambaachaw Mokonniin dabalatee qondaaltota shanitu ajjeefame.
Shakkamtoota Baahirdaaritti qabaman 55 fi kan Finfinneedhaa qabaman 13 namoota yakka ajjeechaa angawoota mootummaa fi ajajoota waraanaan mana murtii dhiyaatan ta'uunis beekkameera.
Magaala Baahirdaaritti shakkamtoota 277 fi magaala Finfinneetti immoo shakkamtoota 140 irratti qorannoon taasifamaa turuu Abbaan Alangaa Waliigalaa Birhaanu Tsaggaayee himaniiru.
'Aanga'oota mootummaa biroo ajjeesuufis karoorri ture'
Poolisii Federaalaa, Abbaan Alangaa Waliigalaa kan Federaalaa fi Naannoo Amaaraa, Eejansii tajaajila Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa, Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Poolisii Magaala Finfinnee qoranicharratti hirmaataniiru jedhan.
Kana malees shakkamtoota magaalaa Baahirdaar keessatti qabaman keessaa 45 yakki isaanii salphaa waan ta'eef gara ragaatti akka jijjiiraman ta'eera jechuun dubbatan.
Kunneen magaala Finfinnee keessatti to'annoo jala oolanii turan 140 keessaa 61 immoo wabiidhaan akka gadi lakkifaman himan.
Qaamoleen nageenyaa magaaloota lamaan keessatti gochicha fashalsuuf hojjetanis miidhaan du'aa fi qaamaa irratti akka qaqqabe ibsan.
Kaayyoo yakka raawwateefi argannoo qorannoo
Kaayyoon yakkichaa inni ijoon mootummaa humnaan fonqolchuun aangoo qabachuudha jedhaniiru Obbo Birhaanun. Kana durallee mootummaan wanti raawwate yaalii fonqolcha mootummaati jedhee ibsuun isaa ni yaadatama.
Kanaafis qophiin humna namaa, meeshaa waraanaa fi iddoowwan mijeessuu heddu qindeessummaa Birgaader Jeneraal Asaamminaw Tsiggeetin taasifamuu ibsicharratti himameera.
Dhimma ajjeechaa irratti Obbo Nigusuu Xilaahun maal jedhan
Magaala Baahirdaaritti waajjira bulchiinsaa Mootummaa naannoo Amaaraa, Komishinii Poolisii naannichaa, waajjira ADP naannichaa akkasumas ajajoota poolisii naannichaa irratti xiyyeeffachuun qophiin taasifamaa tures jedhameera.
Guyyaaa yakkichi itti raawwatamettis BJ Asaamminaw Tsigee fi Shaambal Mammaar Geetinnat namoota biroo fi miseensota Poolisii Addaa Naannoo Amaaraa walin ta'uun gara waajjira Pirezidantii naannichaa imaluu isaanii himan.
Sana boodas darbii sadaffaa irra erga gahanii booda B/J Asaamminaw eegduu pirezidantichaa meeshaa waraanaa erga hiiksisanii booda akka ajjeefamu taasisaniiru jedhan Obbo Birhaanun.
Obbo Izazis eegduun isaanii meeshaa waraanaa akka hiikkatu erga taasifamee booda ajjeefamuun isaani himameera.
Pirezidantii naannichaa kan turan Dr Ambaachaw Mokonnin rasaasaan irra deddeebin erga rukkutamanii booda ajjeefamuu isaanis himaniiru.
Yakka kanaaf qorannoo teknikaa, sanadaa fi ragaa namaa walitti qabuu hojjechuu isaanii dubbatan abbaan alangaa Waliigalaa Obbo Birhaanun.
Haaluma walfakkaatun humni poolisii addaa naannichaa waajjira ADP, manneen ajajoota poolisii fi qe'ee simannaa keessummaatti tarkaanfiwwan garaagaraa fudhachuu isaanii himan.
Haleellaa Waxabajjii 15 kanaanis namootni 15 yommuu du'an digdama kan ta'an madaa'aniiru jedhan.
Adeemsa qorannoo keessattis meshaaleen waraanaa kilaashii dhibbaa ol ta'an irratti qorannoon taasifamuutu himame.
Qorannichaanis kilaashii 11 fi Shugguxii Maakaroovi tokko rasaasa iddoo yakkichaatti dhukaafaman keessa akka ture beekkameera jedhan.
Dabalataan, ragaaleen sanadaa fi maallaqootni biyyaalee biroo qorannichaan manneen shakkamtootaatti argameera jedhan.
Gabaasa walitti dhihaatan:
'B/J Asaamminaw baajaajin miliquuf yeroo yaalan ajjeefaman'
Gaazexeessituu gaafa ajjeechaan raawwate 'B/J Asaamminaw dubbiste'
Haadha warraa B/J Asaamminaw irraa 'ragaan argamaa jira'
Qophii yakkichaaf taasifame
Qophiin ajjeechaa angawoota mootummaa fi qondaaltota waraanaa ji'a Ebla bara 2011 BJ Asaamminaw Tsiggee fi namoota aktivistii ofin jedhanin eegalame jedhan Obbo Birhaanun.
BJ Asaamminaw akka miidhamaa ta'anitti himuun hooggantootni biroo akka jibbamanif hojjetaa turan jedhan.
Waa'ee ''yaalii fonqolchaa'' fi ajjeechaa hanga ammaatti maal beekna?
Dabalataan, B/J Asaamminaw beekkamtii mootummaa federaalaa malee namoota 110 ta'an iddoo adda addaatii walitti qabuun leenjii basaastummaa kennaniiru jedhan.
Leenjin kunis waraana dhokataa, waraana diinagdee fi ximsammuu, ijaarsa loltummaa fi siyaasaa, maloota hordoffii fi kunneen biroo irratti leenjii kennaniiru jedhan.
Miseensota raayyaa ittisa biyyaa sababoota garaagaraan hojii isaanirraa gaggeeffaman fi hojii isaanii dhiisan walitti qabuu fi leenjisuun walitti bu'iinsi naannolee gidduutti akka uummamuf hojjechaa turuu isaanis himan.
Yakki magaala Finfinnee keessatti angawoota waraanaa irratti raawwatames raayyaa ittisa biyyaa keessatti garaagarummaa uumuun akka bittinnaa'u gochuun aangoo mootummaa federaalaa qabachuuf karoorfatamee turuu himan.
Gaafa reeffi Janaraal Sa'aara gaggeeffame Janaraal Birhaanuun maal jedhan
Kanaafis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kudhanii ta'e gara Gondoritti waamun ergamni miseensota biroo horachuu fi angawoota waraanaa ajjeesuu kennameefi ture jedhan.
Jeneraal Sa'aara Mokonnin malee Janaraal Birhaanu Juulaa irrattis tarkaanfin akka fudhatamu ergamni kennameefi ture jedhan.
Qorannoon qorattootni jaatamaa ol irratti hirmaataniiru jedhame kun ragaalee sanadaa fi teknikaan dabalataan ragaalee namootaa 147 irraa ragaan fuudhamuunsaa ibsicharratti himameera.
Gaaffii bilisummaa adeemsa qorannoo taasifame ilaalchisuun dhiyaatef wanti ibsicharratti himame waan lafaa fuudhamee haasa'ame osoo hin taanee kan ragaaleen garaagaraa walitti qabuun hojjetamedha jedhan.
Dabalataan shakkamtootni ajaja mana murtiin ala qabaman fi ilaalcha siyaasaa qabanin to'annoo jala oolanis akka hin jirre himan Obbo Birhaanun.
Hoggantoota Itoophiyaan bara 2011 of biraa dhabde
Qabiinsa shakkamtootaa ilaalchisuunis shakkamtootni yeroo isaanii eeganii mana murtiitti akka dhiyaatan taasifamuutu himame. Kana malees, haalli qabiinsa isaani dhaabbilee garaagaraan daawwatamaa turuu himan.
Dhimma qulqullina fi dhiphina kutaan alatti dhiittaan mirga namoomaa ta'e jedhamee raawwatame akka hin jirre Obbo Birhaanun dubbatan. Himatnis shakkamtoota irratti banamus iddoowwan yakkichi itti raawwatetti akka ta'u himameera.
"Rakkina cimaa keessa galleera, garu ni mo'anna'' - Janaraal Birhaanu Juulaa
Yaalii Fonqolcha Mootummaa: 'Aanga'oota mootummaa biroo ajjeesuufis karoorri ture'
Itoophiyaa bara 2011: Warra bara xumuramaa jiru keessa lubbuu dhaban, bara waliin yaadataman
9 Fuulbana 2019